Qaramada Midoobay Oo Ku Baaqday Dardar Gelinta Amaanka Soomaaliya – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
3rd January 2014 A warsame Af Soomaali 0
New York, Mareeg.com: Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobey aya ku baaqay in la dar dar geliyo taageerada loo fidinayo dowladda Soomaaliya ee dhinacyada Amniga iyo Horumarinta, iyagoo beesha Caalamka ugu baaqay inay xoojiyaan taageerada Soomaaliya.
Kulan Golaha ammaaanka uu ku yeeshay magaalada New York oo laga soo saaray war murtiyeed ayaa lagu sheegay in Soomaaliya laga caawiyo sidii nabad iyo degenaansho loogu soo dabaali lahaa, loogana hortagi lahaaAlshabaab.
Xoghayaha guud ee Qaramada Midoobay Ban Ki-Moon iyo xubnaha Golaha Amaanka ee Qaramada Midoobay ayaa muujiyay sida ay uga xun yihiin weeraradii Alshabaab habeenkii Arbacada ku qaadeen hoteel Jasiira ee magaalada Muqdisho.
Qoraalka kazoo baxay xarunta Qaramada Midoobay ee magaalada New York ayaa xubnaha Golaha Amaanka iyo Xoghaya Guud ee Qaramada Midoobay waxay ku soo jeediyeen in kooxdii ka dambeeyay qaraxyadii Muqdisho caddaaladda la horkeeno.
Waxay hoosta ka xarriiqeen sida uu muhiim u yahay dadaalka ay beesha caalamka ugu jirto dhameynta hanjabaadaha ka imaanaya Al-Shabaab iyo xoojinta taageerada dib loogu soo celinayo nabadda Soomaaliya.
Labo qarax oo habeenkii Arbacada ka dhacday hoteel Jasiira ayaa waxaa ku dhimatay 12 qof, 32 kalena way ku dhaawacmeen.